Raphael Varane oo xaalad jah wareer ah galiyay kooxda Real Madrid, sababa la xiriira…. – Gool FM
(Real Madrid) 12 Okt 2018. Difaaca reer France ee Raphael Varane ayaa xaalada kusii xumeeyay kooxda Real Madrid, kadib markii uu awoodi waayay inuu dhameystirto kulankii saaxiibtinimo ay xalay wada ciyaareen xulalka France iyo Iceland.
Wargeyska “Sport” gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa wuxuu maanta oo Jimco ah shaaca ka qaaday in Raphael Varane uu soo gaaray dhaawac taasoo sababtay inuu isaga baxo kulankii xalay, waxaana isla qeybta hore ciyaarta lagu badalay Kurt Zouma
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaanin Raphael Varane shaki la galinayo ka qeyb galkiisa kula talaadada soo socota ay ay xulka Germany kula ciyaari doonaan tartanka UEFA Nations League.
Laacibka kooxda Real Madrid ayaa maanta oo Jimco ah ku mari doono baaritaano caafimaad xerada tababarka ee xulka qaranka France, si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca uu qabo.
Waxaa xusid mudan in Real Madrid ay haatanba la dhibtooneyso xaalada dhaawac ay qaabaan qaar ka mid ah ciyaartoydeeda sida, Isco, Gareth Bale, Dani Carvajal, Karim Benzema, kuwaasoo dhamaantoo la maqan dhaawacyo kala duwan.